Shiinaha Astragalus soosaarayaasha iyo alaableyda | HEX
ASTRAGALUS, oo loogu talagalay dhirta iyo dawooyinka dhirta Shiinaha si wada jir ah. Radix astragali waxaa lagu soo saaray gudaha Mongolia, Shanxi, Gansu, Heilongjiang iyo meelo kale. Waxay leedahay shaqooyinka qotominta Qi iyo hagaajinta dusha sare, dhiirrigelinta dureerka iyo qallafsanaanta, taageeridda sunta iyo soo bixidda malaxda, iyo soo saarista murqaha. Isticmaalka dawada ee astragalus wuxuu leeyahay taariikh ka badan 2000 sano, cilmi baaris casri ah, Astragalus Saponin, sucrose, polysaccharides, noocyo kala duwan oo amino acids ah, folic acid iyo selenium, zinc, copper iyo nafaqeeyayaal kale. Waxay leedahay shaqooyinka kor u qaadista difaaca jirka, ilaalinta beerka, diuresis, anti-gabowga, ka hortagga culeyska maskaxda, yareynta cadaadiska dhiigga iyo ficillada ka hortagga bakteeriyada.